3.2mm na 4mm fitaratra somary mangarahara momba ny masoandro
3.2mm na 4mm fitaratra masoandro mihosin-draha mazava koa dia antsoina hoe vera photovoltaic izay ampiasaina indrindra amin'ny tontolon'ny masoandro noho ny tahan'ny fandefasana hazavana maivana. Solar panne dia sosona manify ny semiconductor optoelectronic izay mamadika ny herin'ny masoandro ho herinaratra. Amin'ny fandinihana ny fahombiazany ...
1. Ny toetoetran'ny vera ultra-clear vera Ultra-clear, fantatra koa amin'ny vera mangarahara avo sy vera ambany vy, dia karazana vera vy ambany mangarahara. Hatraiza ny haavon'ny fifindran'ny hazavany? Ny fandefasana hazavana amin'ny vera mazava tsara dia mety hahatratra 91,5%, ary manana ny chara ...
1. Ranomainty fitaratra maripana avo lenta, antsoina koa hoe ranomainty vera mahamay be, ny mari-pana sinteria dia 720-850 ℃, aorian'ny fifehezana ny maripana ambony, ny ranomainty sy ny vera dia mifangaro miaraka. Ampiasaina be amin'ny fananganana rindrina ambainy, vera fiara, vera elektrika sns. 2. Ranomainty feno vera: ...
Rehefa ny vokatra fitaratra fitetezana rano dia misy ny olana sasany amin'ny fanapahana sy ny sisin'ny vera tsy mitovy aorian'ny fanapahana azy. Raha ny marina, ny waterjet efa niorina tsara dia manana olana toy izany. Raha misy ny olana dia tokony hadihadiana faran'izay haingana ireto lafin-waterjet ireto. 1. Ny vavahady ...
Inona ny vera mitaingina? Ny vera fitifirana dia noforonin'ny Amerikanina tamin'ny 1865. Izy io dia karazana fitaovam-pananganana vaovao misy insulation hafanana tsara, ins insulateur, estetika ary azo ampiharina, izay afaka mampihena ny lanjan'ny trano. Mampiasà vera roa (na telo) eo anelanelan'ny vera izy io. Equipp ...
Glass antonony ho an'ny tefom-baravarana ampiasaina amin'ny sisin'ny tehezan-drano. Ny vera antonony dia manao zavatra roa: mamela ny mpijery fijery tsy voafehy izy io, ary mahazaka kapoka mafy avy amin'ireo mpilalao miloka ao anatiny. Ny vera iray lafiny iray dia 5/8 na 1/2 santimetatra ny hateviny, ny vera dia mila ahodina ...
Varavarana fandroana Glass 10mm
Inona ilay vera mangatsiaka?
Fepetra takiana amin'ny vera frosted, Mampiasà fomba fanontana hametahana sosona miaro amin'ny tampon'ny vera, ary arovy ireo faritra hafa amin'ilay vera amin'ny sosona misisika, Avy eo atsobohy ao anaty vahaolana vita amin'ny vera ny vera, Mampiasà etimika simika, Ny faritra fitaratra izay ny fiarovana ...
10mm na 12mm varavarana fitaratra tezitra dia ampiasaina amin'ny varavarana ara-barotra, varavarana KFC
Vera antonony rakotra sarimihetsika plastika
Joro boribory lehibe 10mm na 12mm vera voadio ho an'ny fandroana
Inona ilay vera miendrika S?
Ny vera miendrika S fandroana feno vera, ny vera dia mila endrika fanapahana rano S, fitotoana milina fanodinam-bolo ary famolahana. Ny vera S-Shower dia matetika mampiasa 6mm, 8mm ary 10mm ...